Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ na-eme: Enweghị mmetụta ọ bụla!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ahụike • ndị mmadụ • trending Ugbu a
Valneva SE os nke Dynavax Technologies Corporation na-emepụta Ọ bụ ụlọ ọrụ biopharmaceutical zuru oke nke lekwasịrị anya n'iji ike nke anụ ahụ ebumpụta ụwa na nzaghachi mgbochi ọrịa na-emegharị ahụ site na mkpali Toll-like Receptor (TLR). Dynavax na -emepe, na -erekwa ọgwụ mgbochi ọhụụ.
Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi ọpụrụiche, kwupụtara taa nsonaazụ dị mma sitere na nnwale nnwale Cov-Compare nke anaghị arụ ọrụ, onye na-akwado ọgwụ mgbochi COVID-3, VLA19.
Oge dị mkpa nke usoro 3, ikpe Cov-Compare natara ndị ọrụ 4,012 gbara afọ 18 na karịa n'ofe saịtị nnwale 26 na United Kingdom. Ọnwụnwa ahụ zutere njedebe ikpeazụ ya: VLA2001 gosipụtara ike karịa AZD1222 (ChAdOx1-S), n'ihe gbasara geometric pụtara titer maka ọgwụ mgbochi neutralization (nha GMT = 1.39, p <0.0001), (VLA2001 GMT 803.5 (95% CI: 748.48) , 862.59)), (AZD1222 (ChAdOx1-S) GMT 576.6 (95% CI 543.6, 611.7)), yana adịghị ala na usoro nke seroconversion (SCR karịa 95% na otu ọgwụgwọ abụọ) n'izu abụọ ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke abụọ (ya bụ ụbọchị 43) na ndị okenye gbara afọ 30 gbagowe.
Nzaghachi T-cell nyochara na mpaghara nke ndị sonyere gosiri na VLA2001 butere antigen-kpọmkwem IFN-gamma na-emepụta mkpụrụ ndụ T na-emegide S- (74.3%), N- (45.9%) na M- (20.3%) protein.
A nabatara VLA2001 nke ọma. Profaịlụ nnabata nke VLA2001 dị mma karịa ma e jiri ya tụnyere ọgwụ mgbochi na -arụ ọrụ. Ndị sonyere afọ 30 ma ọ bụ karịa kọrọ ntakịrị ihe ọjọọ rịọrọ arịrịọ ruo ụbọchị asaa mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ma n'ihe gbasara mmeghachi omume saịtị (73.2% VLA2001 vs. 91.1% AZD1222 (ChAdOx1-S), p <0.0001) na mmeghachi omume sistemụ (70.2% VLA2001 vs. 91.1% AZD1222 (ChAdOx1-S), p <0.0001).
Enweghi ihe ojoo ojoo siri ike (SAE) nke ekwuputaghi. Ihe na -erughị 1% kọrọ akụkọ ọjọọ nke nwere mmasị pụrụ iche na otu ọgwụgwọ abụọ ahụ. Ndị sonyere n'òtù ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa VLA2001 gosipụtara profaịlụ nchekwa n'ozuzu ya na nke ndị okenye.
Ihe omume COVID-19 (njedebe ngwụcha nyocha) yiri n'etiti otu ọgwụgwọ. Ọpụpụ zuru oke nke ikpe COVID-19 ọ bụla nwere ike na-atụ aro na ọgwụ mgbochi abụọ ejiri mee ọmụmụ ihe gbochiri nnukwu COVID-19 nke mgbanwe (s) na-ekesa (ọkachasị Delta) kpatara.
Adam Finn, Prọfesọ nke Paediatrics, Mahadum Bristol, onye nyocha nyocha ikpe, kwuru, sị: “Mmeghachi omume dị ala na nzaghachi mgbochi ọrịa na-arụ ọrụ dị elu yana nzaghachi T-cell sara mbara nke a hụrụ na ọgwụ mgbochi nje a na-adịghị arụ ọrụ nke ọma yana ihe na-agba ume. Nke a bụ ụzọ ọdịnala ka ukwuu maka imepụta ọgwụ mgbochi karịa ọgwụ mgbochi ndị ebugara na UK, Europe, na North America na nsonaazụ ndị a na -egosi na onye chọrọ ọgwụ mgbochi a nọ n'ụzọ iji rụọ ọrụ dị mkpa iji merie ọrịa a. ”
Thomas Lingelbach, onye isi na Valneva, kwuru, sị: “Nsonaazụ ndị a na -egosi uru a na -ejikọkarị na ọgwụ mgbochi nje niile anaghị arụ ọrụ. Anyị kpebisiri ike iweta onye chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi dị iche na ikikere ngwa ngwa o kwere mee ma gaa n'ihu na-ekwenye na anyị ga-enwe ike inye onyinye dị mkpa n'ọgụ ụwa megide oria ojoo COVID-19. Anyị na -achọsi ike ịtụpụta usoro ọgwụ mgbochi ọzọ maka ndị na -agbabeghị ọgwụ mgbochi. ”
Juan Carlos Jaramillo, MD, onye isi nlekọta ahụike nke Valneva. Nsonaazụ a na -egosi uru nke imekọ ihe ọnụ nke anyị malitere na Septemba 2020 ma anyị enweghị ike nweta nnukwu ihe a ma e wezụga ha. Anyị ga -aga n'ihu na -arụkọ ọrụ ọnụ na MHRA iji mezue ntinye akwụkwọ mpịakọta anyị maka nkwado. "
Valneva malitere nrube akwụkwọ mpịakọta maka nkwado mbụ ya na ụlọ ọrụ UK na -ahụ maka ọgwụ na ngwaahịa nlekọta ahụike (MHRA) ma na -akwado ịmalite ibubata nnyefe maka nkwado ọnọdụ na ụlọ ọrụ ọgwụ ọgwụ Europe. Nkwenye nnwale ikpeazụ nke MHRA chọrọ iji nyochaa iguzosi ike n'ezi ihe nke data VLA2001-301 ka na-aga n'ihu ma bụrụkwa ihe dị mkpa maka ntinye ikpeazụ nke akụkọ nyocha ụlọ ọgwụ.
Dị ka akụkụ nke atụmatụ mmepe ngwaahịa, Valneva emechala mbanye ndị ọrụ afọ ofufo 306 gbara afọ 56 ma ọ bụ karịa na New Zealand n'ime ule VLA2001-304 ya ma na-atụ anya data dị elu na mbido 2022. Valneva ekwupụtala mmalite mbanye ndị ntorobịa dị ka mmụba nke ikpe Cov-Compare.
Companylọ ọrụ ahụ na-akwado maka ule n'ime ụmụaka (afọ 5-12) yana nkwado nkwado nkwado Valneva iji nyochaa arụmọrụ nkwalite VLA2001 maka ndị nwere mkpa nkwado.
Banyere Usoro ikpe 3 Cov-Tụlee (VLA2001-301)
Cov-Tụlee (VLA2001-301) bụ enweghị usoro, onye na-ekpu ìsì, na-achịkwa, nnwale immunogenicity dị na 4,012 ndị okenye na ndị ntorobịa 660. Nkwụsị njedebe immunogenicity bụ ogo GMT nke VLA2001 ma e jiri ya tụnyere AZD1222 (ChAdOx1-S) yana adịghị ala nke ọnụego seroconversion nke mgbochi ọgwụ mgbochi nke a na-enye n'usoro oge ịgba ọgwụ mgbochi abụọ izu anọ iche, tụọ n'izu abụọ ka nke ahụ gachara. ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke abụọ (ya bụ ụbọchị 43) na ndị okenye gbara afọ 30 gbagowe. Ọ na -enyocha nchekwa na nnagide nke VLA2001 n'izu abụọ ka agbachara ọgwụ mgbochi nke abụọ na ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na abụọ gbagowe. A na-eme ikpe ahụ na saịtị 12 n'ofe UK 26 ndị gbara afọ 2,972 na ndị okenye nọ na nha 30: 2 iji nweta ọgwụ mgbochi intramuscular abụọ nke VLA1 (n = 2001) ma ọ bụ AZD1,977 (ChAdOx1222-S) (n = 1) na ọkwa dose akwadoro, ụbọchị 995 dị iche, na ụbọchị 28 na 1. Maka nyocha immunogenicity, nlele sitere na ndị sonyere 29 (990 gbara VLA492, 2001 ọgwụ mgbochi na AZD498 (ChAdOx1222-S)) onye nwalere sero-negative maka SARS- A nyochara CoV-1 na nyocha. Ndị sonyere 2 ndị nọ n'okpuru afọ iri atọ ka etinyere na ndị otu na-agwọ ọrịa na-enweghị usoro wee nata VLA1,040 ụbọchị 30 iche. A na-enyocha data nchekwa na ndị sonyere na afọ 2001-28 dị ka ndị okenye gbara afọ 18 gbagowe. N'oge na -adịbeghị anya, ikpe ahụ malitere idebanye aha ndị ntorobịa mbụ sonyere.
VLA2001 bụ naanị nje ugbu a, enweghị ọrụ, onye na-achọ ọgwụ mgbochi megide COVID-19 na nnwale ụlọ ọgwụ na Europe. Ezubere ya maka ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị nọ n'ihe ize ndụ iji gbochie ibute ọrịa na ọrịa mgbaàmà na COVID-19 n'oge ọrịa na-aga n'ihu ma nwee ike mechaa maka ịgba ọgwụ mgbochi oge gụnyere gụnyere ịza ụdị ọhụrụ. VLA2001 nwekwara ike dabara maka ịkwalite, n'ihi na egosiri ọgwụ mgbochi ugboro ugboro na -arụ ọrụ nke ọma yana ọgwụ mgbochi anaghị arụ ọrụ. A na-emepụta VLA2001 na ikpo okwu Vero-cell guzobere na Valneva, na-enye teknụzụ teknụzụ maka ọgwụ mgbochi encephalitis Japanese nke Valneva nyere ikike, IXIARO.®. VLA2001 mejupụtara ngwa ọrụ nje SARS-CoV-2 niile nwere nnukwu njupụta S-protein, yana ngwa mgbakwunye abụọ, alum na CpG 1018. Ngwakọta adjuvant a na-ebutekarị ọkwa antibody dị elu na nnwale nnwale karịa usoro alum naanị na egosi. ngbanwe nke nzaghachi mgbochi ahụ na Th1. Ihe nkwado CpG 1018, nke Dynavax Technologies Corporation (Nasdaq: DVAX) na-eweta, bụ akụkụ nke US FDA- na HEMA-HEPLISAV-B kwadoro.® ogwu. Usoro nrụpụta maka VLA2001, nke emegogogogogo na ọkwa ikpeazụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gụnyere enweghị ike kemịkal iji chekwaa ntọala nke S-protein. A na -atụ anya na VLA2001 ga -ekwekọ n'usoro chọrọ igwe oyi (ọkọlọtọ 2 ruo 8 Celsius).
Akụkọ banyere ọnụahịa ngwaahịa Valneva SE
Valneva bụ ụlọ ọrụ ọgwụ mgbochi ọpụrụiche lekwasịrị anya na mmepe na azụmaahịa nke ọgwụ mgbochi maka ọrịa na -efe efe nwere nnukwu mkpa ahụike na -egbochighị. Companylọ ọrụ ahụ na -ewere ụzọ pụrụ iche na nke ezubere iche maka mmepe ọgwụ mgbochi ma tinyezie nghọta miri emi ya na sayensị ọgwụ mgbochi iji mepụta ọgwụ mgbochi prophylactic na -ekwu maka ọrịa ndị a. Valneva ejirila ikike ya na ike ya mee ihe iji wee zụọ ahịa ọgwụ mgbochi abụọ yana ịkwalite ọtụtụ ndị chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi n'ime na site n'ụlọ ọgwụ, gụnyere ndị na-emegide ọrịa Lyme, nje chikungunya na COVID-19.